Dhowr xeerar in la raaco ee design ee caaryada u samaynta caag - Aojie Qaab Co., Ltd.
Dhowr xeerar oo la raacayo naqshadeynta caaryada sameynta caagga ah
Iyada oo horumar joogto ah ee warshadaha wax soo saarka ee Shiinaha, horumarinta warshadaha ayaa hawlo badan oo dheeraad ah oo ku saabsan alaabta caag ah. Waxaa jira xeerar adag oo ku saabsan cabbirka, tilmaamaha iyo dulqaadashada alaabta. Naqshadaynta caaryada samaynta caaggu waa in la helo wax -soo -saarka caaryada caagga ah. Iyada oo ah qayb muhiim ah oo tayo leh, naqshadeeyayaashu waa inay si taxaddar leh u qorsheeyaan cabbirka iyo tilmaamaha caaryada, oo waliba tixgeliyaan dhibaatooyinka ka dhici kara naqshadeynta iyo habka wax -soo -saarka, oo si guud u tixgeliya nidaamka naqshadeynta, si loo hagaajiyo heerka guusha ee naqshadeynta .
Sidaa darteed, hagaajinta heerka naqshadaynta caaryada ayaa ahmiyad weyn u leh horumarinta warshadaha wax soo saarka ee caagga ah. Sida naqshadeeye caag caag ah, waxaa lagama maarmaan ah in si firfircoon loo baaro fikradaha naqshadeynta iyo qaababka cusub, si taxaddar leh loo falanqeeyo dhibaatooyinka naqshadeynta ee la kulmay, la helo xalal si looga fogaado dhibaatooyinka. Soo noqnoqda, qaado tillaabooyin wax ku ool ah si loo wanaajiyo hufnaanta iyo cilmiga cilmiga naqshadaynta caaryada, ka dibna xallinta dhibaatada, hagaajinta hufnaanta naqshadeynta, hagaajinta isku halaynta alaabooyinka caagga ah, hagaajinta faa'iidooyinka dhaqaale ee alaabta.
Qaybaha leh saxnaanta sare ee cabbirka iyo qaabka, naqshadeeyayaashu waa inay si taxaddar leh u naqshadeeyaan oo ay u buuxiyaan shuruudaha saxda ah. Waqtiga naqshadeynta iyo isticmaalka tamarta caadi ahaan kama yara p42.5; cabbirka guud waa isku mid. Saamiga alaabta la taaban karo waa inay ahaato mid macquul ah, saamiga ugu fiicani wuxuu si wax ku ool ah u wanaajin karaa awood la'aanta shubka. Dildilaaca inta badan lagu arko dhismayaasha shubka ah ayaa ah: dildilaaca heerkulka, dildilaaca, dildilaaca dejinta, dildilaaca iwm. Heerkulku aad buu u sarreeyaa xagaaga. Markaad adkeyneyso shubka, ku buufi biyaha waqtiga si aad u hubiso in dusha sare qoyan yahay.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee lagala kulmo geedi socodka caagaga samaynta naqshada caaryada kuma filna inay ka dhigaan naqshadeeyayaasha inay ka leexdaan naqshadda caadiga ah. Habka naqshadaynta caaryada, naqshadeeyayaasha caaryada ahi ma laha xeerar adag oo nidaamsan iyo xeerar cad oo loogu talagalay naqshadaynta caaryada iyo wax -soo -saarka. Sidaa darteed, heerka naqshadeynta naqshadeeyayaasha qaarkood laguma cabbiro halbeeg mideysan. Isticmaalka badeecooyinka balaastigga ah oo aad iyo aad u ballaaran, shuruudaha saxsanaanta alaabooyinka caagga ah ee loo adeegsaday waqtiyo kala duwan ayaa iyaguna kala duwan.